I-CTparental, isixhobo solawulo lwabazali esifumanekayo kwi-Ubuntu | Ubunlog
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-CTparental. Yi le Isixhobo se ulawulo lwabazali esetyenziselwa ukulawula indlela umntu azisebenzisa ngayo izixhobo, nokuba uyangena kwi-Intanethi okanye uyinika nakuphi na okunye ukusetyenziswa.
Kwabo bangaziyo, I-CTparental sisixhobo esihle kakhulu sokucoca ukufikelela kumxholo wewebhu. Esi sixhobo sidibanisa izinto ezinje nge dnsmasq, iptables e yangasese yangasese, ezenza i-CTparental isisombululo esipheleleyo solawulo lwabazali. Isoftware ye-CTparental ine-interface esisiseko kunye nokusebenziseka lula. Iyahambelana nezikhangeli zewebhu ezahlukeneyo, kubandakanya iFirefox, iMidori, iChromium, kunye nezinye.
Eyona nto ibalulekileyo, i-CTparental isebenzisa zonke izixhobo eziyila ukuyila Isisombululo esigqibeleleyo solawulo lwabazali, esibonakalayo esinokusebenziseka ngokulula nesisebenziseka lula yi-lighttpd. Kule migca ilandelayo siza kubona ukuba i-CTparental ingafakwa njani kwi-Ubuntu 20.04 LTS.
1 Iimpawu ngokubanzi ze-CTparental
2 Faka i-CTparental kwi-Ubuntu 20.04
3 Ukufikelela kunxibelelwano lwewebhu lwe-CTparental
Iimpawu ngokubanzi ze-CTparental
Emva koko siza kubona ezinye zeempawu eziqhelekileyo ze-CTparental
Sinako hluza umxholo ongalunganga usebenzisa uLuhlu oluMnyama okanye uluhlu olumhlophe.
Nathi sinako ukwenjenjalo lawula ixesha olichithe ukhangela i-Intanethi kunye nolawulo lweeyure ezisebenzayo zezixhobo.
Ukongeza sinako setha indawo yokucoca iwebhusayithi ngokweendidi.
Siza kukwazi setha elona xesha liphezulu lokukhangela umsebenzisi. Ngaphandle kweqela labantu abangalungenisi ucoco.
Izaziso zingathunyelwa kumsebenzisi yonke imizuzu, kwimizuzu emi-5 yokugqibela ngaphambi kokucinywa.
Sinako hluza iisayithi zesiko ukubenza bafikeleleke nokuba bakho kwelinye lamahlelo esifuna ukuwathintela.
Iya kusivumela iinjini zokukhangela ezithathwa njengezingakhuselekanga.
Lawulo lwe Imithetho yesiqhelo yee-iptables.
Isebenza ngeFirefox, Midori, Chrome, njl..
Iya kusinika ithuba lokuba nyanzela uphendlo olukhuselekileyo kuGoogle.
Okwangoku iilwimi ezi-3 ziyaxhaswa; IsiNgesi, isiFrentshi kunye español.
Ezi zezinye zeempawu zenkqubo. Inga Nxibelelana nazo zonke ngokweenkcukacha kwi Indawo yokugcina izinto kwiGitlab.
Faka i-CTparental kwi-Ubuntu 20.04
Ukufakelwa kwe-CTparental ku-Ubuntu 20.04 unako Sebenzisa iphakheji .deb esinokuyifumana kwifayile ye- iphepha lokukhupha iprojekthi. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba ufumana ingxelo yokugqibela yale nkqubo.
Iphakheji .deb nayo khuphela ngokuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye usebenzise i-wget ngolu hlobo lulandelayo:
Ngaphambi kokuba uqhubeke nokufakwa kwe-CTparental, siya kuthi fakela isixhobo se-gdebi:
Okwangoku, sinako Sebenzisa i-gdebi ukufaka iphakheji .deb yokukhuphela:
Ukuba iingxaki zokuxhomekeka zivela ngexesha lofakelo, okokuqala kuya kufuneka siphumeze lo myalelo kwisiphelo sendlela:
Emva koko uqalise kwakhona umthetho:
Ngexesha lofakelo, inkqubo Iya kusicela ukuba simisele igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukuze ungene kamva kwi-interface yayo yewebhu. Kufuneka kuthiwe igama eligqithisiweyo kufuneka libe ngamanani okanye amanani, ngaphandle kokusebenzisa oonobumba abakhethekileyo.
Ukufikelela kunxibelelwano lwewebhu lwe-CTparental
Nje ukuba yonke into ifakwe ngokuchanekileyo, lixesha lokuba fikelela ujongano lwewebhu kwaye wenze useto esiludinga apho. Ukufikelela kwi-URL yewebhu kuya kuqwalaselwa ngokuzenzekelayo, kunye nemigaqo efanelekileyo ye-iptables. Akukho luqwalaselo lunye luyafuneka ukuze i-URL isebenze. Ukufikelela kwi-webparental web interface, kwi-web browser yethu kuya kufuneka singene kule khonkco ilandelayo:
Isikrini esiza kuboniswa, izakusicela ukungqinisisa. Ngale nto kuyakufuneka sisebenzise igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo esalibonelela ngalo ngexesha loqwalaselo.
I-CTparental sesinye sezixhobo ezilungileyo zokucoca ukufikelela kumxholo wewebhu. Njengoko inika i-web interface ekulula ukuyisebenzisa, oko kuthetha ukuba nabani na angayilawula.. Esi sixhobo sinokufakwa kwimizuzu emi-5 kwaye sikulungele ukusetyenziswa.
Ngolwazi olongezelelweyo ngamathuba anikezelwa yile nkqubo, kuyacetyiswa ukuba uqhagamshelane ne Indawo yokugcina iprojekthi eGitlab okanye yakhe Wiki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » I-CTparental, isixhobo solawulo sabazali esifumanekayo ku-Ubuntu
Inguqulelo entsha yophuhliso lwewayini 6.14 ifika malunga notshintsho olungama-260